China Air conditioner ac lwekontraka abavelisi kunye nabathengisi | UJunwei
LC1-D Series AC lwekontraka ilungele ukusetyenziswa kwiisekethe ukuya ombane ulinganiselwe 660v, AC 50hz / 60hz, ulinganise yangoku ukuya ku 95A, ngokwenza, ngokwaphula rhoqo ukuqala & isixhobo umatshini-engenelela njl njl, iba isihlanganisi dalay, mechanical Isinxibelelanisi esingena ngaphakathi, inkwenkwezi-ye-starta delta.
Inkcazo yemveliso 1
I-HLC-1NT00AAC ikulungele ukutshintshiselana nge-50 okanye i-60hz, iVolting Working Volting ukuya kwi-277v, i-Fixed Operating Current to 20A yeSigaba esisodwa sokuLawulwa kweSekethe yokuLawula, ngoku, isebenza ngokubanzi kwiSigaba esiSebenzayo seSekethe esiSekethe esiPhambili kunye neSigaba esisodwa Ulawulo lweCompressor yeCompressor.
2 .IKhontrakthi yeNkonzo yesiqhelo kwaye ifaka imeko
a. Kubushushu boMoya obujikelezileyo Ixabiso elilinganiselweyo li-65, lifumana
Ezantsi Ixabiso Elilinganiselweyo -25
b. Ukufakwa kweSayithi yokuPhakama akudluli kwi-2000m
c. Inqanaba loNgcoliseko lomoya ngamaNqanaba ama-2
d. Ukufakwa kweCandelo Ngaba Ii;
e. Ufakelo olujongane neGradient alugqithisi ± 5 °
f. Ukuthotywa okungaphawulekiyo, ifuthe nendawo yokungcangcazela.
Ipharamitha yobuGcisa e-3
a. I-coil yeContorina ichola i-75% ~ 110% kuthi ngokuthembekileyo
Ukusebenza, ukuPhuma kwayo kwiVoltage kwi-20% ~ 70% kuthi
b. Udidi lokuNxibelelana noNxibelelwano: Ac-1Ac8a
c. Isinxibelelanisi ngaphakathi ngeNdawo ye-0.4m, Ingxolo yaso ngezantsi kwe-40db.
4. Ukufaka iiNkcukacha kunye nokuFakela ubungakanani
a. Ukufakwa kweNdlela eya kuLungiselelwa isiKrufu, ezinye iintlobo ezimbini zokuFakela ubungakanani bokukhetha uhlobo olunye lobungakanani bendawo efanelekileyo yokulinganisa kunye neplane ethe tyaba ziiNdawo eziMileyo eziMileyo azinkulu kune- ± 5 °
b. Phambi Ukusetyenziswa Kufuneka Uhlole The Terminal Power Kwaye lwekontraka
Ukudityaniswa okukhawulezayo nokuba ngaba ufakelo lufikile, lunokuthenjwa, luthintela ukudala
Ukophuka, ngasemva kokujonga ukuCima ngoMeyi.
Egqithileyo Umaphuli wesekethe yaseAfrika i-PG MCCB
Okulandelayo: Ukubonelela fuse ombane Low
I-20-40 FLA 1p / 2p UMXHUMELEKI WOQHAGAMSHELWANO LWE-AC AIR
I-50-90 yeFLA yokuCoca uMoya kwi-Ac Contactor
JMC (GMC) series 20A-200A AC lwekontraka
CJX2-D (LC1-D) Series Ac lwekontraka
CJX2-K (LC1-K) Series AC lwekontraka Series